ओलीको ६ बुँदे एकता प्रस्तावले जोगिएला एमाले ? « Drishti News – Nepalese News Portal
ओलीको ६ बुँदे एकता प्रस्तावले जोगिएला एमाले ?
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार ६ : २४ मा प्रकाशित
अध्यक्ष ओलीको एकता आह्वान र कार्यकर्ताको दबाबका कारण माधव नेपाल समूहका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पनि पार्टी एकताको पक्षमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको एकता आह्वानलाई नेपाल समूहका नेताहरूले पनि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।